ဂျူနီယာဝင်း – လမ်းတွေပေါ်မှာ တွေ့နေရတဲ့ ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်တွေက ကြော်ငြာသက်သက်ပဲလား
Photo – Yan Naung BotaHtaubg ဂျူနီယာဝင်း – လမ်းတွေပေါ်မှာ တွေ့နေရတဲ့ ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်တွေက ကြော်ငြာသက်သက်ပဲလား (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈ ကြီးမားသော ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင်ဖူးကြပါသည်။ ၄င်းတို့က တေးဂီတများ ကြော်ငြာများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြသနေကြပါသည်။ ယင်းသည် ရုပ်မြင်သံကြား မျက်နှာပြင်လိုပဲ အလုပ်လုပ်ပါ သည်။ အဲသည်က ကြော်ငြာများသာမက သတင်းထူး သတင်းဦးများကိုလည်း ပြသပေးနေသလို ငလျင်သတင်းများ ၊ မုန် တိုင်းလာတော့မည့် သတင်းများကို အဆက်မပြတ် လွှင့်ထုတ်ပေးနေသောကြောင့် လမ်းသွားလမ်းလာ ပြည်သူ များအတွက် တော်တော်လေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုမျက်နှာပြင်သည် ပြင်းထန်သော နေ၏အပူရှိန်ကိုလည်း တုန့်ပြန်နိုင်ကာ အလင်းရောင်မပြန်စေဘဲ...
ရန်နောင်(ဗုိုလ်တထောင်) – ဝမ်းအိုဝမ်း ကိုမြတ်စံ တဖြစ်လဲ သုံးရောင်ခြယ်ကိုမြတ်စံ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈သုံးရောင်ခြယ်ကိုမြတ်စံ တယောက် မနက်လင်းအားကြီးက အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို သူ၏ နှမဖြစ်သူ မသူဇာက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်မှ သိတာပါ။ ဖျားနေတာ ရှစ်ရက် လောက် ရှိပြီတဲ့။ အစာလည်း မဝင်ဘူးတဲ့။ သတင်း သိသိချင်း အပြေးသွားချင်ပေမယ့် မောင်ရန်နောင် ရောက်နေတဲ့ နေရာက ဇေကမ္ဘာဝင်းအတွင်းက ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်မှာလေ။ ဇေကမ္ဘာဝင်းကတော့ ကမ္ဘာကျော် သတင်းဖြစ်တဲ့ ဆေးပြားတွေ အများကြီး သယ်ဆောင်လာတဲ့ ကွန်တိန်နာကားကြီး ပိုင်ရှင်မဲ့ မိတဲ့နေရာပေါ့။ ကိုမြတ်စံကို နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးရောင်ခြယ် မြတ်စံ ဆိုပြီး လူသိများပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအပြီးမှာ ကိုမြတ်စံတို့ရဲ့ သုံးရောင်ခြယ်အဖွဲ့က...
K ငြိမ်းချမ်း – လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့တောမီးများ (မိုးမခစာအုပ်စင်) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈ ကဗျာဆရာ – အောင်ဘညို စာအုပ်အမည် – တောမီး အမျိုးအစား – ကဗျာ ဘာသာပြန် – မောင်ညီညွတ် ထုတ်ဝေသည့်ကာလ – ပထမအကြိမ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၆ ထုတ်ဝေသည့်တိုက် – နှစ်ကာလများ တန်ဖိုး – ၂၀၀၀ ကျပ် ကဗျာဆရာအောင်ဘညို ၂၀၁၆ ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ယုဇနအိမ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ယခုဆို ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ တယ်။ ၃နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအနေနဲ့ သူ ကွယ်လွန်ပြီးမှထုတ်ဝေခဲ့တဲ့တောမီးကဗျာစာအုပ်အကြောင်းရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ (လေးစားစွာ) စာပေလောကသားတွေက အေဘီညိုလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာ အောင်ဘညိုရဲ့ တတိယမြောက်...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အကြောင်းညီညွတ်ရင်
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အကြောင်းညီညွတ်ရင် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈နွေညတစ်ညတွင် ပူအိုက်သောကြောင့် အိပ်ရာမ၀င်နိုင်ကြသေးဘဲ သံပရာဖျော်ရည်သောက်ရင်း အောက်ပါအတိုင်း စကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြလေသည်။ အဖေ။ ။ သားရဲ့ညီလေးက ပုဆိုးမ၀တ်ဘူးကွ။ ပြောလို့လည်း မရပါဘူးကွာ။ ပွဲလေးဘာလေးရှိမှပဲ ပုဆိုးအတင်းဝတ်ခိုင်းလို့ ရတယ်။ ဘောင်းဘီပဲ ၀တ်နေတာကြည့်ပြီး သား အမေက အိုက်လိုက်တာ သားလေးရယ်လို့ ပြောပြောနေတာ ကြားရတယ်။ သား။ ။ ဒါ သူတို့လူငယ်တွေအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ ၀တ်ချင်တာကို ၀တ်နေရရင် စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း အအေးဓာတ်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံသွားပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဖေက လူငယ်တွေကို ပုဆိုးဝတ်တာကြိုက်သလား၊ ဘောင်းဘီဝတ်တာကို သဘောကျသလား။ အဖေ။ ။ ဒို့ငယ်ငယ်တုန်းက နယ်မှာ ညနေဖက် ပြေးပြေးလွှားလွှား ကစားကြတော့...
ဇင်လင်း ● တစိတ်ဝမ်း တလက်ညီ ပြည်ရေးကို ပြိုင်တူ ချီကြဖို့လိုသည် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈ လက်ငင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးပေါ်ကိစ္စသည် လက်နက်ကိုင် ဘက်အသီးသီးက အမြန်ဆုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆုံးဖြတ် ကြရန်ဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်(NCA) ပြဿနာသည် အဖြေထွက်တော့ မလိုလိုနှင့် တစ်ဆို့ တန့်ရပ်နေခဲ့သည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟု ပြောပါက သေနတ်သံများ တိတ်သွားအောင် အရင်ဆုံးလုပ်ကြ ရမည်လည်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ဘက်အသီးသီးက ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားပါသည်ဟု နှုတ်အားဖြင့် စကားအလှများ ပြောဆို နေကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင် သေနတ်ပစ်ဖေါက်ခြင်းများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် အပစ်ရပ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အဖြေထုတ်မရသည့် ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းအပြင် တစ်နိုင်ငံလုံး...
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ပြေးမလွတ်တွေ …
ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ပြေးမလွတ်တွေ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီထွေး Related posts ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စီမံကိန်းတွေ … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် သွားလည်ပါကွယ် … (0) ကာတွန်း ညီထွေးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မကျသေးပါ (0) ကာတွန်း ညီထွေး ● မြန်မာအိုင်ထော (0) ကာတွန်း ညီထွေး ● ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက် …. (0)
စမ်းစမ်းတင် – သေရဲသူတွေ
စမ်းစမ်းတင် – သေရဲသူတွေ (မိုးမခ) ဇွန် ၉ ၊ ၂၀၁၈ စစ်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဟဲမင်းဝေးဟာ သူ့ကိုယ်သူသေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တယ်။ စစ်ကို အပြီးမသတ်နိုင်လို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်လိုက်တာလား။ နားရွက်တဘက်ဖြတ်ပစ်တဲ့ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုးဟာ နေကိုတည့်တည့်ကြည့်ပန်းချီဆွဲတတ်ပေမဲ့ ကျီးမည်းတအုပ်ပျံသန်းတဲ့ ပန်းချီတချပ် လက်စသတ်ပြီး သတ်သေသွားပြန်ရော လူတကာကို ဟာဒယရွှင်ဆေးတိုက်ကျွေးတဲ့ ရော်ဘင်ဝီလီယံစ်က သူ့ကိုယ်သူ ပျော်အောင်မနေတတ်ဘဲ သတ်သေ အလှအပတွေဖန်တီး အမျိုးသမီးကမ္ဘာကို အလှလည်းဆင် သူကိုယ်တိုင်လည်း အလှကြီးလှတဲ့ ကိတ်စပိတ်ကတော့ အလှအပတွေကျောခိုင်း လောကအရိုင်းကို သေရဲခြင်းတရားနဲ့ကျောခိုင်းသွား ကမ္ဘာတလွှား နေရာတကာသွား၊ တွေ့သမျှစား၊ လူတိုင်းနဲ့လည်းဆုံ၊ ရောက်ရာနေရာ အကြောင်း သူ့အစီစဉ်တွေထဲ တစေ့တစောင်း ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြတဲ့ ပညာကျွမ်းတဲ့ အန်တော်နီဘော်ဒင်းက အောင်မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှု၊ ကြွယ်ဝမှုတွေကို ခဝါချ သူ့အသက်ကိုသူသတ်သတဲ့။...
မောင်သာမည – ဂုဏ်သိက္ခာများနှင့် အိမ်ပြန်ချိန် (မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်) ဇွန် ၉ ။ ၂၀၁၈ ( လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး။ ယခုတော့ အမျိုးသားညွန့် ပေါင်းအစိုးရနဲ့ အဖွဲ့ ဝင်များကို အကြမ်းဖက်သူများအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ အိမ်ပြန်လာနိုင်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထို ဆောင်းပါးကို ထပ်ပြီး တင်လိုက်တာပါပဲ) နိုင်ငံရေးအဖိုးအိုတယောက်ရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်မှာ ရတဲ့ ဆုလာဘ်က “ ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ထိုး၊ အသနားခံစာ တင်၊ ဘယ်ထဲမှ ၀င်မပါနဲ့ ၊ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ပဲ တွေ...
ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို ကွယ်လွန်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည့် မန္တလေးမှာ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၈ စာပေလောကမှ အေဘီညို လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို ကွယ်လွန်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အ ခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့ရှိ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုကနေ ဦးဆောင်ပြီး မန္တလေးမြို့၃၅လမ်း၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရားအနီးရှိ စန္ဒာအောင်ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာ ဇွန်လ ၁၀ရက်နေ့ မနက် ၈နာရီခွဲမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့ သိ ရပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ကွယ်လွန်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ ကဗျာဆရာအောင်ဘညိုရဲ့သားငယ် မောင်အောင်ဗဟိန်း ဟာ ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာ နှစ်ချင်းပေါက် သမိုင်းဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် ၎င်းအား မန္တ လေးစာပေလောကမှ...
လှကျော်ဇော – ကျောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေး ကျွန်မဆက်၍ရေးချင်သော ဖေဖေအကြောင်းများ – (၄၇) (မိုးမခ) ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ မေလ (၃၁) ရက်နေ့က ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနက တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဟောပြောခြင်း၊ စာတမ်းဖတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်လိုက်သည် … ဆိုတဲ့သတင်းတရပ် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ ဗမာပြည်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က (ကိုလိုနီခေတ်ကစလို့) ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားများ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်သင့် မပါဝင်သင့် ဆိုတဲ့ ပြသာနာ တကျော့ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ သြော် သေချာတာကတော့ ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲစဉ်ကြီး မပြီးသေးဘူး … ဆိုတာပါပဲ။ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ (၁၉၃၈-၃၉) ကာလက ရန်ကုန်ကြည်မြင်တိုင် ဆရာဖြစ်သင်အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အဖြစ်...
ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာ၊ အရက်နှင့် မောင်မိုးသူ
ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာ၊ အရက်နှင့် မောင်မိုးသူ (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၈ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေထဲမှာ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာနဲ့ အရက်တွေလည်းပါသပေါ့လေ။ မောင်မိုးသူဟာ အဲသည် သုံးမျိုးစလုံးကိုသုံးစွဲသောက်စားလာသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းကို ပထမဆုံး ထောင်ထဲမှာ ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကတည်းကစတင်ခဲ့သည်ထင်ပါရဲ့။ စီးကရက်ကို စသောက်တတ်တာ။ နောက်တော့ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းတို့၊ စုံထောက်မောင်စံရှား(ရှားလော့ဟုမ်း)တို့ ကိုအားကျပြီး ဆေးတံလည်း သောက်ဖူးတယ်ခင်ဗျ။ ဆေးတံသောက်တုန်းကလည်း နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆေးတံကိုမှ အကောင်းစား သတ်မှတ်ပြီး သောက်ခဲ့တာ။ ဆေးဘူးထဲ ကပ်ဖ်တန်တို့၊ကာစတန်တို့၊ အင်ဖိုးဒါးတို့မှ သောက်ချင်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးတံသောက်ရတာ ကရိကထများလွန်းတာကြောင့် ဆေးပြင်းလိပ်ပြောင်းသောက်လိုက်တယ်။ မန္တလေးက လူပျံတော်ဆေးပြင်းလိပ်ဆိုတာ မောင်မိုးသူကြိုက်ခဲ့ သောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်ပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလည်း စထရန်းဟိုတယ်မှာရောင်းတဲ့ ပရဲစိတန့်ဆိုတဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်ကို...
အောင်ဝေး –တောင် စ မု တ် က ၊ထောင် ထု ပ် မ ရ ရ င် ၊ကြောင် ကု တ် မှာလားဘေ ဘီ
အောင်ဝေး –တောင် စ မု တ် က ၊ထောင် ထု ပ် မ ရ ရ င် ၊ကြောင် ကု တ် မှာလားဘေ ဘီ (မိုးမခ) ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၈ ဒဂုန်တာရာ ကစ မောင်လေးအောင် အဆုံး ပန်းတစ်ကုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (သခွပ်နီ) အသိက ဘ၀ကို မပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါဘူး ဘ၀ကသာ အသိကို ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်။...
KT# ဝမ်းတွင်းရူး သျှီသူအောင် (မိုးမခ) ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၈ ဝမ်းတွင်းရူးတွေက ဘယ်လိုမှကုမရဘူး။ မထူးခြားတာတွေလုပ်တဲ့ အရူးပါးလိုလည်းမဟုတ်ခဲ့။ မျက်နှာမှာ သေနပ်ခါး ပေါင်ကြားမှာ သေးကြောင်း ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့ စာလုံးပေါင်းပြတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့သာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရပါတယ်ဆိုရင် လူတိုင်းမှာလည်း အသွေးအသားနဲ့ အသည်းနှလုံးနဲ့ ခံစားချက်နဲ့ပဲ။ ဘယ်အရူးကိုမှ လူကောင်းက မလုပ်ကြံဘူး လူကို လူလိုမသိတာ အရူးတွေသာ ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ ဝမ်းတွင်းရူးတွေပါဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မသိကြ သိနေရင်လည်း ဝန်မခံကြ ဝန်မခံပေမယ့် ဆက်ရူးကြ။ သမိုင်းတခေတ်မှာ လိုင်းညစ်တွေမသန့်ရှင်းတာလည်း ဝမ်းတွင်းရူးတွေကြောင့်ပါပဲ။ ။ Tags: သျှီသူအောင် Related posts No related posts.
ဂျူနီယာဝင်း – သွားပွတ်တံအစ (မိုးမခ) ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၈ သွားပွတ်တံကို တီထွင်ခဲ့သူမှာ တရုတ်ပြည်က ဖြစ်ပါသည်။ ၁၄၉၈ ခုနှစ်တုန်းက စတင်တီထွင် အသုံးပြုတာဟု ဆိုပါသည်။ ထိုစဉ်တုန်းကသွားပွတ်တံထိပ်က အမွှေးကြမ်းများမှာ ဝက်၏ ကျောဖက်က အမွှေးများကနေ ရပါတယ်။ ၎င်း အမွှေးကြမ်းများကို အရိုးရှည်ရှည်ထိပ်တွင် ချည်နှောင်ကာ သွားတိုက်တံသဖွယ် အသုံးပြုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်သုံးနေသော သွားပွတ်တံများကတော့ ဝက်နောက်ကျောက အမွှေးများ မဟုတ်တော့ဘူးဟု ထင်ပါတယ်။ ပုံတွင် ယနေ့ခေတ် သွားပွတ်တံများကို မြင်တွေ့ ရပါမယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
စပျစ်ကို နေရာမရွေး၊ ရာသီဥတုမရွေး စိုက်လို့ရတယ် – (အင်တာဗျူး) အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စပျစ်သီးအများဆုံးထွက်သည့်နေရာမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ဖြစ်သည်။ ရမည်းသင်း တွင် ဧက ရာထောင်ချီစိုက်ပြီး ထွက်လာသောစပျစ်ကို မြို့အများအပြားသို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ ဆေးပုလဲကုန်းကျေးရွာမှ ကိုလှိုင်ထွန်း ပြောပြသည့် စပျစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု အခြေအနေများအကြောင်းကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မေး။ ။ စပျစ်ကို ဘယ်ဒေသတွေမှာ ဘယ်လို စိုက်ပျိုးနေကြသလဲ။ ဖြေ။ ။ အပူပိုင်းဒေသဆိုရင် စင်တင်စနစ် အစိုက်များပြီး တောင်ပေါ်ဒေသ၊ အအေးပိုင်း ဒေသတွေမှာ ကြိုးတန်း၊ တိုင်ထောင် စနစ်ကို အစိုက်များပါတယ်။ ခေတ်နဲ့အညီ တိုးတက်လာတဲ့ စိုက်နည်းစနစ်များထဲမှ စိုက်ပျိုးရလွယ်ကူပြီး...
ကျော်ထင် ● အရည်အသွေးများဖြင့် ဖြတ်သန်းခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၊ ၂၀၁၈ ● လောကအဓိပ္ပါယ်၊ ရသအနက် လောကရဲ့အဓိပ္ပါယ်က လူပါ။ လူ့ပြည် လူ့ရွာလို့ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ သတ္တ၊ သင်္ခါရ၊ သြကာသဆိုတဲ့ ဘုံသုံးပါးဆိုတာကတော့ အများအသိပါ။ ဒါကြောင့် လည်း လူသားဆိုတာကို လောကသားလို့ခေါ်ကြတာပါ။ ဒီအခေါ်အဝေါ်ဟာ လူကို လောကသုံးပါးနဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်နေလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ လောကဆိုတာ လူလို့လည်း အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရသရဲ့အနက်ကတော့ အရည်၊ အရည်အသွေးနဲ့ အကျင့်တို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သာယာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကိစ္စနဲ့ ပြဒါးဆိုတဲ့ အနက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အရသာနဲ့ ခံစားမှုဆိုတာကတော့ အများစုသိတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေပါ။ ကျနော်ကတော့ ရသဆိုတာ ခံစားနားလည်တာ၊ အဲ့ဒီ့...
ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ ပူဆာစရာမလိုသူတွေ …
ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ ပူဆာစရာမလိုသူတွေ … (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
စိန်ဝင်း ● ခါးသီးတဲ့ အရှိတရားတွေ (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ သူ့ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ကူးယူပါသည်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးရွှေမန်းတိုက်စစ်အတွဲအကြောင်း ၂၀၁၄ လောက်ကရေးထားတဲ့ စာ တစ်ပုဒ်ပြန်ဖတ်မိတော့ ဒီတိုက်စစ်အတွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲရေးဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ဦးရွှေမန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြော ရင် ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း ပါလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ချင်းမတဲ့ဘူးဆိုပြီး လူအများပြောလေ့ရှိတယ်။ အဲသလိုနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးကွဲ သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပါတီကွဲထွက်တာမဟုတ်ဘဲ ဦးရွှေမန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပိုနီးသွားတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ချန်ပီယံဘွဲ့ခံတယ်။ ဒီမှာ စပ်မိလို့ပြောရရင် ဦးသန်းရွှေက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံကနေ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးပုံပြောင်းတော့ နံပါတ် ၃ ဖြစ်တဲ့ ဦးရွှေ မန်းကို သမ္မတအရာမထားဘဲ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတအဖြစ်ရွေးတာအပေါ် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတချို့က ဦးရွှေမန်းဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးလုိ့၊ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းလို့ စသဖြင့် ပြစ်ချက်တွေရှိတာကြောင့်...
ကာတွန်း လူကိုနော် – LCD က အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း လူကိုနော် Related posts ကာတွန်း လူကိုနော် – မခံနိုင်ကြတော့ဘူး တဲ့ (0)
သားကြီးမောင်ဇေယျ – မိုးကိုမျှော်နေပါပြီ
သားကြီးမောင်ဇေယျ – မိုးကိုမျှော်နေပါပြီ (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ အင်းစိန်ထောင် အဆောင် ( ၃ )အပေါ်ထပ်၊ အခန်း ( ၂ ) မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ၀န်ကျင်။ အချိန်က ညနေ ၄ နာရီ ၊ အဆောင်ပိတ်ချိန်။ “မင်းတို့က နံရံကို ခေါင်းနဲ့ တိုက်တဲ့ကောင်တွေ မှတ်လောက်အောင် ပုံစံပေးရမယ် အားလုံးပုံစံ” ကျားဟိန်းသလို ဟိန်းလာတဲ့ တန်းစီးအောင်မြင့် ရဲ့ အသံနဲ့ အတူ ကျနော်တို့ ကျောင်းသား ၄ ယောက် နာဂ ထွန်ကြည် (ဥပဒေ ကျောင်းသား) ၊ ဌေးဝင်း (ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား) တင်မောင်ကြည် ခေါ် ကဗျာဆရာ...
ဇွန် ၆ အလုပ်သမားအရေးတော်ပုံ ၄၄ နှစ် ပြည့် ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်)၊ မိုးမခ၊ ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ (၄၄) နှစ်​​မြောက်​ မ.ဆ.လ စစ်​အာဏာရှင်​ဆန့်​ကျင်​​ရေး ၇၄ – ၇၅ – ၇၆ အလုပ်​သမားအ​ရေးအခင်း နှင့်​ ​ကျောင်းသားလှုပ်​ရှားမှု နှစ်​ပတ်​လည်​အထိမ်းအမှတ်​ အခမ်းအနားကို ၆.၆.၂၀၁၈ ယ​နေ့နံနက်​ပိုင်းက ရန်​ကုန်​မြို့​တောင်​ဥက္ကလာရှိ စိတ်​တိုင်းကျခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်​။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကိုအောင်မှိုင်း – ဇွန် ၆ စိတ်ဓါတ်
ကိုအောင်မှိုင်း – ဇွန် ၆ စိတ်ဓါတ် (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ အဖေက နံရံကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တာလားတဲ့။ အမေက သားဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့။ ဒီနံရံတွေကို ကျနော်တို့ခေါင်းတွေနဲ့ တိုက်ကြပါမယ် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ တိုက်ကြပါမယ် နာနာကျဉ်းကျဉ်း တိုက်ကြပါမယ် တိုက်လဲတိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကြား တချိူ့လဲ ဘ၀ကူးမကောင်းခဲ့ကြသလို တချိူ့ လဲ ဘ၀တွေလေဟုန်စီးကုန်ကြတယ် တချိ့လဲ မားမားမတ်မတ်ရပ်လျှက်ပါဘဲ။ အခုလေ နံရံကြီးတွေ ပြိုစပြုလာပြီအဖေ။ အခုလေ နံရံကြီးတွေ ကွဲအက်လာပြီအမေ။ ခေါင်းတွေပေါ်က ချူပ်ရိုးစတွေမှာ သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ကျနေဆဲပေမဲ့ ကျနော်တို့ အားတက်နေဆဲပါ အဖေနဲ့အမေ။ သွေးမြစ်ကြီးတွေပေါ် လမ်းလျှောက်ရင်း တေးသစ်တွေ သီဆိုလျှက်ပါ အဖေနဲ့အမေ။ ခေါင်းတွေဟာ တိုက်ရလွန်းလို့ အသားမာတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၁)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၁) (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ ဓရံဆာလာမှာ မိုးတွေ အရမ်းရွာနေသည်။ ဒီမိုးနဲ့ကတော့ ညနေဘက် လမ်းလျှောက်ထွက်လို့ မဖြစ်တော့။ ညနေငါးနာရီ ထိုးတော့မည်။ မျှစ်ချဉ်နဲ့ ၀က်သားတွေကို တ၀ကြီးဘုန်းပေးထားသော ငနုချောင်းသားကြီးကလည်း အိပ်တုန်း။ အခါတိုင်း လာနေကျ ဆရာမေလည်း ဒီနေ့ရောက်မလာ။ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကော်ဖီဖျော်ဦးမှ။ ဂစ်စ်မီးဖိုကလေးနဲ့ ရေနွေးတည်၊ တိဗက် သီလရှင်လေး အာဂျန်ပေးထားသော ကော်ဖီမစ်တစ်ထုပ်ကို မတ်ခွက်ထဲဖောက်ထည့်လိုက်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် စတီး လ်ဇွန်း ဖြင့် ခပ်နာနာကလေး ခေါက်ထည့်လိုက်သည်။ တဒေါက်ဒေါက်ခေါက်သံကြားတော့ ခုတင်ကြီးပေါ်တွင် ဆန့်ဆန့်ကြီးအိပ်နေသော ငနုချောင်းသားကြီးက တချက်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်သေးသည်။ သို့သော် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဟောက်သံသဲ့သဲ့ကို...
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● အရှိန်ရလာသည့် ဝိုင်စပျစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ ရမည်းသင်း — ကပ်ကြေးကိုင် ခြံလုပ်သားတို့က စပျစ်ကို အခိုင်လိုက်ညှပ်ကာ ခြင်းထဲထည့်နေကြသည်။ ကား၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ်များကလည်း စပျစ်သေတ္တာအပြည့်တင်ဆောင်ကာ စိုက်ခင်းဘေးမှ မောင်းထွက်သွားကြသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်ရှိ ဤခြံများမှ စပျစ်နှစ်မျိုးထွက်ရှိရာ အသီးစားစပျစ်သည် ပွဲရုံ လက်ကားဒိုင်တို့မှ တစ်ဆင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ သစ်သီးဝလံရောင်းသည့်ဆိုင်များသို့ သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်စပျစ်တို့က ဝိုင်အရက်ချက် လုပ်သည့် စက်ရုံများသို့ သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရမည်းသင်းမြို့နယ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသော စပျစ်တောင်သူတစ်ဦးကို မေလဆန်းပိုင်းက တွေ့ရစဉ်။ စိုက်စရ်ိတ်သက် သာ၊ ဝယ်သူက ခြံအထိလာခြင်းတို့မှာ ဝိုင်စပျစ်စိုက်ပျိုးရခြင်း၏ အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အလယ်ကုန်းကျေးရွာမှ တောင်သူ ဦးစန်းအောင်က ဝိုင်စပျစ်...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ပြောင်းမွေးချိန် တန်ပြီ … (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဇော်အောင်(မုံရွာ) – မဟာဓါတ်အားလိုင်း၊ ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဓါတ်ငွေ့လျှပ်စစ် ဆက်ရန်ရှိသေး (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ ဆူပရီ ကုမ္မဏီကြီးက မင်းကင်းအမတ်ကို အခွင့်ရရင် အရေးယူဖို လုပ်မယ်ဆိုတော့၊ မင်းကင်းအမတ်က မှားယွင်းပြောဆိုတယ်လို့၊ သူတို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ အတိအလင်း ရေးပါတယ်။ အာဏာရှိသူထက် ငွေရှိသူကို ပိုကြောက်နေရတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လို့ သူ့ဖေ့ဘုတ်မှာ ၀င်မန့်တဲ့သူ တယောက်မှ မတွေ့သေးဘူး။ ထားပါတော့။ ငါးကြီးကြီး စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး ကြော်စားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ နှုတ်ထွက်တာနဲ့ပဲ ပြီးသွားသလို ဆိုပေမဲ့၊ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးတွေ သတိထားကြဖို့၊ ဟိုတုန်းက ဆိုးခဲ့၊ ခိုးခဲ့၊ ကံဇာတကောင်းလို့ ရခဲ့တဲ့ အထုပ်အပိုးတွေကို .. အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က ထွက်ပြီး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ...
ဗကသ(အထက်ဗမာပြည်) အတွင်းရေးမှူးဟောင်း စန်းယု ကွယ်လွန် (မိုးမခ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ ကိုစန်းယု( ၄၉)နှစ်၊ ကဗျာဆရာ( အက်စ်ဝိုင်(ခ)စန်းယု) ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(အထက်ဗမာပြည်) အတွင်းရေးမှူး (၁၉၈၉-၉၀) မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ (၁၉၈၉-၉၀) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း သည် ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ နံနက် ၃ နာရီက ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် မိသားစု၊ ရဲဘော်၊ မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ ၀မ်းနည်းကြောင်း မိုးမခက မှတ်တမ်းပြုလိုက်ပါတယ်။ မန္တလေးမြိုရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်သူ ကဗျာဆရာစန်းယု ဇွန်လ ၆ ရက် နံနက် ၃ နာရီအချိန် ၈၃လမ်း၊ ၁၈×၁၉လမ်းကြား အိုးတော်လုပ်တန်းရပ်ရှိနေအိမ်မှာ သွေးတိုးရောဂါဖြင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။ ကဗျာဆရာ( အက်စ်ဝိုင်(ခ)စန်းယု)ဟာ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(အထက်ဗမာပြည်)အတွင်းရေးမှူး(၁၉၈၉-၉၀)...
မြတ်စံ – ကျနော်နဲ့ မိုဟာမက်အာကြီး (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈ မနေ့က TV Channel နိုင်ငံခြားသတင်းတော်တော်များများမှာ ကမ္ဘာကျော်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ မိုဟာမက်အာလီ အသက် ၇၄ အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကြည့်မိနေရင်း ကျနော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇော်မင်း (ခ) အာဗြဲ (ခ) ခမောက်ကြီး (ယ္ခု USA မှာနေထိုင်) ကို အမှတ်ရမိပါတယ်။ ၁၉၈၈ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့။ RIT ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင်တို့ကို ၁၉၈၈ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်အောက်က အုပ်ချုပ်မှုယန္တားယားစက်ရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းမှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ အာဏာရှင်စံနစ်ကို စတင်အံတုတဲ့အချိန် – ဒီမိုကရေစီစံနစ်အတွက် ဗွေဆော်ဦးစတင်တဲ့ ခြေလှမ်းအစ…...
ပန်းချီထွန်းအံ့ရဲ့တတိယကြိမ်မြောက် ရေဆေးတကိုယ်တော်ပြပွဲ ဇွန် ၉ ရက်ကနေ စပြသမယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၃၂၀၁၈ ပန်းချီဆရာထွန်းအံ့ရဲ့ NEW AREA II အမည်ရတဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် တကိုယ်တော် ရေဆေးပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန် မြို့ မဟာဗန္ဓုလလမ်း(ဘားလမ်း)(ထက်) အမှတ် -၂၃၈ ရှိ Studio Square မှာ ဇွန်လ ၉ရက်ကနေ ၁၃ ရက်ထိပြသသွား မယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲပြသခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပန်းချီဆရာထွန်းအံ့က “အခုပွဲက ရေဆေး( water colour) ပေါ့ ။ရေဆေးကိုမှ ကိုယ် သန်သလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးထားတဲ့ ရေးဟန်ပါ။ ကျနော်က အဲ့ဒီလိုရေးဟန်ကို သဘောကျတယ်။ အခုပြပွဲနဲ့ဆို ၃ ကြိမ်မြောက်ပေါ့။ တကိုယ်တော်ပြပွဲတွေပေါ့။ အုပ်စုလိုက်ပြပွဲတွေလည်း တော်တော်များများပါဘူးပါတယ်။...
Page3of 902«12345...902»
>Nyan Si - Yellow Rose Plain
မှန်တာတွေ များများ ရေးနိုင်ပါစေ (Maung Pyaw Chin)
အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) - ၈၈ မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး စုပြီးပါတီထူထောင်တာမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်